Ø Gaadiid ay ciidamad gumaysiga Itoobiya dhaceen.
Ø Dad ay ciidamada Itoobiya xidh xidheen.
Ø Kililka Koonfurta Itoobiya : Xafiiskii xisbiga Dimoqraadiga ah oo la xidhay.
Ø Itoobiya oo mar kale diidday go, aankii soohdinta.
Ø Wasiirka arimaha dibada ee Eritreya oo wada-hadal la yeeshay madax Ruush ah.
Ø Barnaamuj aanu ku soo qaadanayno dhacdooyinkii ugu danbeeyay ee Ogaadeenya.
Ø Waraysi aanu la yeelanay fanaanka wayn ee maxanuud Cabdi (Jaango) iyo waliba waxyaabo kale oo aad ka heli doontaan.
Gaadiid ay ciidamad gumaysiga Itoobiya dhaceen.
Ciidamad gumaysiga Itoobiya ee ku sugan xuduuda ay Ogaadeenya la wadaagto Soomaaliya ayaa bilaabay hawlgal ay ku dhacayaan gaadiidka iyo hantida dadka ka ganacsada Soomaaliya iyo Ogaadeenya.
Sida uu noo soo tabiyay wariyaha Radio Xoriyo ee magaalada Jigjiga waxay ciidamada Itoobiya ee ku caan baxay boobka hantida dadwaynaha Todobaadkii lasoo dhaafay dhaceen gaadiid ay saaraayeen badeecooyin iyo waliba xoolo nool oo loo iib gaynayay dhinaca Soomaaliya halka kuwo kalana loo iib keenayay Ogaadeenya.
Qaar ka mid ah gaadiidkaas ay ciidamada wayaanuhu qabsadeen waxaa saaraa Adhi tiradiisu ay gaadhaysay 450 Neef, halka ay 4 Baabuur oo kalana saaraayeen badeecooyin kala duwan. Gaadiidkas ayaa intiisa badan lagu qabtay deegaanka Daroor oo aan sidaas uga fogeen magaalada Jig-Jiga.
Dhinaca kalana waxaa magaalooyinka Hargaysa iyo Barbara Todobaadkii hore ku sugnaa wafti Itoobiyaan ah oo uu hogaaminayo wasiirka arimaha gudaha ee Itoobiya, kaas oo maamulka Goboladaas kala hadlayay arimo ku saabsan dhinaca nabad galyada iyo sidii ay Itoobiya u istcmaali lahayd Dakada Barbara.
Dad ay ciidamada Itoobiya xidh xidheen.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Dhagax-Buur ayaa sheegaya dad badan oo ay ciidamada Itoobiya 22.09.03 xabsiyada u taxaabeen. Waxaana ka mid ah dadkaas qaar laga keenay magaalada Gunagado.
Dadka Gunagado laga keenay waxaa ka mid ah.
1- Muxumed Ahmed Cabdille.
2- Shariif Indha weyne.
3- Cabdulaahi Cabdi Bakeeri.
4- Cabdulaahi Mohamed Xussein iyo
5- Amina Xassan Ciise
Waxaa kale oo iyaguna magaalada Dh/Buur lagu xidhay daka kala ah
1- Assad Xukkun Muumin.
2- Maxamuud Gaab.
3- Shamso Cabdi Xaashi.
4- Ardo Yuusuf Madoobe.
5- Quraysh Cabdi Siyaad.
6-. Quraysh Cali Ahmed.
7- Aamina Xassan Carab.
8- Sacdo Maxamed Cilmi, oo iyada oo umul ah xabsiga loo taxaabay iyada iyo ilmaheediiba.
9- Khayro Ahmed Muxumed
10- iyo Nin la yidhahdo Bacaluul
sidaas oo kale waxaa magaalada Qabridahare lagu xidhay niman reer Fiiqeed
ah, uu ka mid yahay: khaliif Macallin Qaalib. Waa iyana Magaalada Dhuxun lagu xidhay dad uu ka mid yahay: Mohamuud Cabdi Guhaad, oo la sheegay in uu la shaqayn jiray hayadda amniga Gobolka.
Kililka Koonfurta Itoobiya : Xafiiskii xisbiga Dimoqraadiga ah oo la xidhay
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Shika ee Kililka Koonfurta Itoobiya ayaa sheegaya in la xidhay xafiskii uu halkaas ku lahaa xisbiga Dimqradiga Itoobiya, waxana isku xeeray ciidamo aad u tiro badan oo xukuumada Wayaanaha ka socda, kuwaas oo si xoog ah ku galay xafiika, isla markaana xabsiga u taxaabay guddoomiyhii xisbiga Birhanu Hayle.
Wararku waxay intaas ku darayaan in laga dajiyay xafiiskaas calankii xisbiga, isla markaana albaabada loo laabay, shaqaalihii xisbiga u shaqaynayayna shaqooyinkoodii laga eryay.
Nin u hadlay xisbiga Dimoqradiga Itoobiya ayaa sheegay inay tallaaboyinka ay dawlada Itoobiya ku qaadayso xisbiyada ay mabaadiida iskaga soo horjeedaan ay yihiin kuwo ka baxsan hannaanka dimoqraadiyada oo ay dawlada Wayaanuhu caadaysatay.
Xukuumada Wayaanaha ayaa sidoo kale dhawaan albaabada u laabtay xafiis uu ku lahaa xisbiga Dimqraadiga Oromiya magaalada Adis Ababa, waxayna tallaabooyinka noocan ahi ka dhigan yihiin kuwo ay xukuumada Wayaanuhu ku doonayso inay keligeed ku hanato talada dalka, iyadoo ayna jirin xisbiyo mucaarad ah oo si dhab ah uga soo horjeeda siyaasaddeeda.
Itoobiya oo mar kale diidday go, aankii soohdinta.
Itoobiya ayaa mar kale diidday go, aankii ka soo baxay guddiga soohdinta ee Qarammada Midoobey, oo magaalada Bademe xaq u siiyay dawlada Eritereya, waxayna diidmadan cusub ka denbaysay maalmo yar kadib markii uu Golaha Ammaanka ee Qarammada Midoobey Itoobiya u sheegay in looga baahan yahay inay oggolaato go, anka guddiga.
Golaha Ammaanka ee Qarammada Midoobey ayaa diiday codsi qoraal ah oo keligii taliye Meles Zenawi uu daba-yaaqadii bishii hore u soo diray, kaasoo uu Golaha Ammaanka kaga codsaday in dib loogu noqdo go, ankii ka soo baxay guddiga xallinta khilaafka soohdineed ee u dhexeeya Itoobiya iyo Eritereya.
Xukuumadda Itoobiya ayaa iyaduna mar kale dhaleecaysay go, anka guddiga. Bayaan ay soo saartay wasaarada warfaafinta Itoobiya ayaa lagu sheegay in Itoobiya ayna marna aqabali doonin go, aanka guddiga soohdinta ee magaalada Bademe siinaya Eritereya, waxayna xukuumadda Itoobiya bayaankan ku sheegtay in go, aanka guddigu uu horseedayo xasillooni darro iyo dagaal hor-leh.
Warkan ka soo baxay xukuumada Adisababa ayaa muujinaya sida aysan Dowlada Malese u hogaansamaynin qawaaniinta caalamiga ah.
Wasiirka arimaha dibada ee Eritreya oo wada-hadal la yeeshay madax Ruush ah
Wasiirka arimaha dibada ee waddanka Eritreya Mr. Cali Saciid Caballa ayaa wada-hadal la yeeshay wasiir ku xigeenka arrimaha dibada ee dalka Ruushka Mr. Urri Fedetov.
Wada-hadalladan dhex maray masuuliyiinta Eritereya iyo Ruushka waxay u badnaayeen sidii loo dhammaystiri lahaa go’ ankii soohdinta lagu sugayay ee ka soo baxay gudida soohdinta ee caalamiga ah. Wasiirka arrimaha dibada ee Eritereya ayaa u sheegay wasiir ku xigeenka arrimaha dibada ee Ruushka in beesha caalamka looga baahan yahay inay dawlada Itoobiya ku khasabto inay sharciga caalamiga ah u hoggaansanto oo ay aqbasho go’aankii ay Qaramada Midoobay ka soo saartay soohidinta u dhaxaysa dalkiisa iyo Itoobiya.
Mr. Urri ayaa isaguna dhiniciisa carrabka ku adkeeyay in la hirgalinayo go’ ankii gudida soohdinta Eritereya iyo Itoobiya wax kastoo ay qaadataba, waana sharci aan meel laga maro lahayn oo kama danbays ah ayuu ku daray. Wasiirka arrimaha dibada ee Eritereya wuxuu sidoo kale la kulmay wasiirada arimaha dibada ee dalalka Yaman iyo Aljeeriya Mr. Abu Beker Al -Karbi iyo Mr. Ollemi Adengi, waxayna ka wada- hadleen arimo muhiim u ah iyo siidii loo sii xoojin lahaa saxiibtinimada ka dhaxaysa wadanka Ertrea iyo dalalka Aljeriya iyo Yaman.